DHAGEYSO Digniino loo diray shacabka ku nool degmada Caabudwaaq. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Digniino loo diray shacabka ku nool degmada Caabudwaaq.
Taliska Ciidamada booliiska degmada Caabud_waaq ee gobolka Galgaduud bartamaha dalka Soomaaliya ayaa soo saaray awaamiir la xiriirta waxyaabaha maanka dooriya ee magaaladaasi la soo galiyo.
Taliska ayaa digniin u diray dadka waxyaabaha maanka dooriya magaalada soo geliya ee ka keena deegaano kala duwan oo dalka Itoobiya uu ka mid yahay
Taliyaha booliiska Magaalada Caabud_waaq Dhamme Maxamed Yuusuf Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qofkasta oo lagu qabtaa waxyaabah maanka dooriya lagu ganaaxayo lacag dhan 1500 doolar ka dibna xabsiga loo tixaabi doono.
Waxa uu xusay in aysan raali ka ahayn in shacabka la marin habaabiyo amni darana laga shaqeeyo ayna marwalbo ciidamada amaanku diyaar u yihiin inay waxyaabahaasi ka hortagaan.
Taliyaha saldhiga ciidamada Booliska ee magaalada Caabudwaaq ayaa tilmaamay inay ku daba jiraan dad la sheegay inay dalka Itoobiya ka keenaa waxyaabaha maanka dooriya sharcigana ay horgeyn doonayaa kadib marka ay gacanta ku soo dhigeen.
Saraakiisha amaanka Caabudwaaq ayaa sheegay in Mudooyinkii dambe ay magaalada ku soo bateen dad ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya oo dhibaato amni iyo mid bulsha magaalada ku keentay.
Dhanka kale Taliska ciidamada booliiska Magaalada Caabud_waaq ee gobolka Galgaduud ayaa shacabka ugu baaqay iney la shaqeeyaan hay’addaha amaanka ee Magaaladaasi ka howl gala si nabad galyada magaaladu u noqoto mid la isku halayn karo.
← Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelo oo magaalada Jowhar ka bilaabay kulamo uu uga hortagayo mooshin ka dhan ah.
DHAGEYSO barnaamijka kulanka star, tahniyadaha iyo salaamaha 07-10-2018 →